Cocohealth Organic Extra Virgin Coconut Oil | Buy online | SHOP.COM.MM
Cocohealth Organic Extra Virgin Coconut Oil
ဝမ်းမှန်၍ အပူအပုပ် ကင်းစေခြင်း။
Sold by Cocohealth
Excellent multipurpose product
Yes. I have used it myself and my family too. 5* feedback Read more Hide
အရမ်းကောင်းတဲ့ Products လေးပါ အိမ်ကအဒေါ်အတွက်အရမ်းအဆင်ပြေပါတယ်. Read more Hide
Cocohealth is multipurpose oil and has so many health benefits. Our family use it for different concerns, I use for my skin, my mom uses for her knee problem, my sister consumes it to lose fat. the whole family love it. Great product! Read more Hide
တကယ်ကိုသဘာဝအုန်းဆီနံသင်းသင်းလေး မွှေးတယ် ကိုယ်အလေးချိန်လည်းကျသွားတယ် အရမ်းကောင်းပါတယ် Read more Hide
Cocohealth Origanic Extra Virgin Coconut Oil is manufactured by Mya Ayer Co.,LTD using Japanese Technology. It isaproud product of Myanmar which is especially processed to meet the standard of FDA. Coconut is one of the world's most nourishing super foods. Extra virgin coconut oil is extracted from organic coconut and it renews the cells from body since it is rich in Anti-oxidants. It is cold-pressed and never refined, deodorized or bleached! The product is already tested and passed in laboratories of Japan.It can be taken as dietary supplement by taking one table spoon per day 30-mins before meal. You can also use as luscious, soothing oil on your skin and hair. Use coconut oil asanatural skin moisturizer, eye make-up remover, or deep conditioning hair treatment.
ကိုကိုးဟဲလ်တံဆိပ် သဘာဝဆေးအုန်းဆီသည် ဂျပန်နည်းပညာဖြင့် မြန်မာပြည်တွင် မြဧရာ ကုမ္ပဏီလီမိတက်မှ ပထမဆုံး စွန့်ဦးတီထွင်၍ မြန်မာပြည်သူများ ကျန်းမာရေးအတွက် မိတ်ဆက်ထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ဆေးပစ္စည်းဖြစ်သည့်အတွက် လိုအပ်သည့် အာဟာရစံချိန်စံညွှန်း အတိအကျပါဝင်စေရန် အထူးအလေးထား ထုတ်လုပ်ထားသော မြန်မာပြည် ဂုဏ်ယူရသည့်ထုတ်ကုန်ဖြစ်ပါသည်။ သဘာဝအုန်းသီးစိမ်းမှ ထုတ်လုပ်ထားပြီး Antioxidants ကြွယ်ဝစွာ ပါဝင်သောကြောင့် ခန္ဓာကိုယ်တွင်းရှိ ဆဲလ်များကို ပြန်လည်ရှင်သန်စေပါသည်။အပူဓာတ်နှင့် ပြင်းထန်သော ဖိအားကို လုံးဝ မသုံးဘဲ နည်းပညာမြင့်စွာ ထုတ်လုပ်ထားပါသည်။ ဂျပန်နိုင်ငံ၏ ဓာတ်ခွဲခန်းများတွင် ဆေးဝါးသုသေသနပြု စမ်းသပ်ပြီး အောင်မြင်ထားပါသည်။ အစားမစားမီ နာရီဝက်အလိုတွင် အာဟာရဖြည့်စွက်ဓာတ်စာအဖြစ် တစ်နေ့တစ်ဇွန်း သောက်သုံးရန် လည်းကောင်း၊ ခန္ဓာကိုယ်ကို Body Lotion အဖြစ်လိမ်းရန် လည်းကောင်း ထုတ်လုပ်ထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
အသက် (၄၀)ကျော်လာသည်နှင့်အမျှ ခန္ဓာကိုယ်ရှိဆဲလ်များသည် နေ့စဉ်သေကြေပျက်စီးလျက်ရှိပြီး အသစ်ပြန်ဖြစ်ရန် နှေးကွေးလာကာ ဒူးနာခြင်း၊ ခါးနာခြင်း၊ အဆစ်အမြစ်များနာကျင်ကိုက်ခဲခြင်းကြောင့် လမ်းလျှောက်ရန် ကြောက်ရွံ့လာကြသည်။ ထို့ကြောင့် Virgin Coconut Oil ကို နေ့စဉ်ပုံမှန်သောက်သုံးခြင်း အားဖြင့် အဆစ်အမြစ်များကြားရှိ ဆဲလ်များကိုလျင်မြန်စွာ အသစ်ပြန်လည်ဖြစ်ပေါ်စေပြီး ခံစားနေရသော နာကျင်ကိုက်ခဲခြင်းများကို သက်သာပျောက်ကင်းစေပါသည်။
HIV ရောဂါဝေဒနာရှင်များအတွက် ခုခံအားစနစ်ကို ကောင်းမွန်လာစေခြင်း။
အစာခြေစနစ်ကို ကောင်းမွန်စေ၍ ညဘက်အိပ်မပျော်ခြင်းများ သက်သာလာခြင်း။
ခေါင်းကြည်ခြင်း၊ စိတ်ကြည်လင်လန်းဆန်းလာခြင်း၊ အာရုံစူးစိုက်မှုအားကောင်းလာခြင်း။
မီးယပ်၊ သွေးဆုံးချိန်တွင် ဖြစ်ပေါ်လေ့ရှိသော ကိုက်ခဲနာကျင်ခြင်းများကို သက်သာစေခြင်း။
ခြောက်သွေ့သောဆံပင်သားများအတွက် အစိုဓါတ်ကိုရရှိစေခြင်း၊ ဗောက်ပျောက်စေခြင်း၊ ဆံသားကို နူးညံ့ပျော့ပျောင်းစေခြင်း။
အရေပြားတွင် ဖြစ်တတ်သော နှင်းခူရောဂါများအတွက် သက်သာစေခြင်း၊ ရောဂါနုပါက လုံးဝပျောက်ကင်းစေခြင်း။
ထိခိုက်ရှနာဒဏ်ရာများအတွက် အနာကျက်မြန်စေခြင်း၊ ပြင်ပပိုးမွှားများဝင်ရောက်ခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးခြင်း။
နို့တိုက်မိခင်များ နို့ထွက်အားကောင်းမွန်းစေခြင်း၊ ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်တက်လာခြင်းကို ထိန်းထားနိုင်ခြင်း။
ကလေးများအတွက် Baby Oil အဖြစ်အသုံးပြုနိုင်ခြင်း၊ ကလေးငယ်များတွင် ဖြစ်တတ်သော မတ်ခရုများကို သက်သာပျောက်ကင်းစေခြင်း၊ သေခံအပူလောင်ခြင်းများကို ပျောက်ကင်းစေခြင်း။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်လောင်းများတွင် ဖြစ်တတ်သော ပျို့အန်ခြင်း၊ အစာအိမ်အချဉ်ဖောက်ခြင်းကို သက်သာစေခြင်း၊ ဗိုက်သားများယားယံခြင်းနှင့် ဗိုက်ကြောပျက်ခြင်းများကို ပျောက်ကင်းစေခြင်း၊ ကိုယ်ဝန်ဆိပ်တက်၍ ခြေလက်ယောင်ရမ်းခြင်းများကို သက်သာစေခြင်း။
သွားကျန်းမာရေးအတွက် နေ့စဉ်မိနစ်၂၀ခန့် ငုံ၍ အာလုတ်ကျင်းပေးခြင်းဖြင့် ဆေးလိပ်ဂျိုး၊ ကွမ်းဂျိုးများကို ကွာကျစေခြင်း၊ ဘက်တီရီးယားပိုးမွှားများ ပေါက်ဖွားခြင်းကို ဟန့်တားပေးခြင်း၊ သွားများ ပိုမိုဖြူစင်လာခြင်း။
မိန်းကလေးများအတွက် ဈေးကြီးပေးရသော Spa သို့သွားစရာမလိုဘဲ Virgin Coconut Oil ကို သကြားနှင့်ရော၍ ရေမချိုးမီ နှိပ်နယ်ပေးပါက အသားအရေစိုပြေ၍ ချောမွေ့စေခြင်း။
အသားဖြူလိုသူ ပျိုမေများအတွက် Virgin Coconut Oil (၂)ဇွန်းနှင့် သံပုရာရည်(၂)စက်မျှရော၍ အိပ်ရာဝင်ချိန်လိမ်းပေးခြင်းအားဖြင့် အသားအရေကို အမှန်တကယ်ဖြူစင်ဝင်းပစေပါသည်။
နေလောင်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်တတ်သော အမဲစက်များ၊ အသားရောင်မညီညာခြင်းများကို သက်သာပျောက်ကင်းစေခြင်း။
အားကစားသမားများ ခြေထောက်ကြောပြတ်ခြင်းများ၊ ပေါင်ကြောပြတ်ခြင်းများကို သက်သာစေခြင်း။
သွေးပေါင်ကျနေသောအချိန်တွင် Virgin Coconut Oil ကိုမသောက်သုံးသင့်ပါ။
နေရောင်ခြည်တိုက်ရိုက်ကျသောနေရာတွင် မထားရှိရပါ။ အာနိသင်ပျက်ပြယ်စေပါသည်။
> နံနက်စာမစားမီ မိနစ်သုံးဆယ်ခန့်အလိုတွင် ပုံမှန်ထမင်စားဇွန်း တစ်ဇွန်းသောက်ပြီး ရေသောက်ပါ> ကော်ဖီ၊ လက်ဘက်ရည်၊ ရေခဲမုန့်တို့တွင် အနံ့အရသာအဖြစ်ဆမ်း၍ သုံးဆောင်နိုင်ပါသည်> ဟင်းချက်ရာတွင် ထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအညီညွတ်ဆုံးဆီ ဖြစ်ပါသည်> ကလေးများကို Baby Oil အဖြစ်လိမ်းပေးနိုင်ပါသည်။